Courier Custom biyuhu dahaaray Baako Baako Delivery Bacaha Pizza Courier
Isticmaalka: Dhiirrigelinta, Cuntada, Qaboojiyaha, Jaadka, Bannaanka, Cake Pizza
Magaca badeecada: bacda pizza
Midabka: Casaan, Madow
Cabbirka: 20*20*9 inch ama Custom
Shayga: bacda gudbinta cuntada
Magaca: bacda diiran ee cuntada/bacda pizza
Unugyada Iibinta: Shey keli ah
Nooca Xidhmada: CARTON
Waqtiga Hogaaminta: 30
* * Ka dhig gaadiidka bacda pizzas kulul dadaal la'aan bacdan bixinta pizza ee dahaaran.
* * GAADIIDKA DHIBAATADA leh: sifeeyayaal heer sare oo heer sare ah iyo xiritaanka jillaab & loop si looga ilaaliyo cuntada inay kulaylku lumiyo.
* * XEERARKA DHAQANKA: Biraha birtu waxay sii daayaan uumi xad -dhaaf ah si ay u ilaaliyaan tayada cuntada waxayna ka ilaaliyaan boorsooyinka inay ilaaliyaan qoyaanka ama urta xun.
* * ISTICMAALKA FUDUD: Wuxuu leeyahay suun si fudud loo qaadan karo, iyo loop laalaad oo bixiya kaydin sahlan iyo qalajin habboon.
* * DURABLE: bannaanka nylon-dhamaadka sare wuxuu bixiyaa sanado wax-qabad, waana makiinad dhaqda.
* * DARDAARAN CADDAYN CADEED: Waxay u oggolaanaysaa in si fudud loo calaamadeeyo amarrada, taariikhaha, iyo heerkulka.
* * Dibadu waa mid u adkaysata biyaha si loogu oggolaado dhalmada xaalad kasta oo cimilada ah sida roobka, roobka, ama barafka. Marka aan la isticmaalin, bacdu waa la burburin karaa si habboon, kaydinta meel-dhigashada ee jikadaada.
* * Waqtiga Muunadda: Sida caadiga ah 7-10 maalmood gudahood 1-3 naqshado kala duwan; in ka badan 3designs, waxay u baahan yihiin inay ku xirnaadaan tilmaamaha dhabta ah iyo shuruudaha.
Hore: Kulaylka Dahaarka leh ee Pizza Cuntada Bixinta Qaboojiyaha Pizza
Xiga: Bacaha qaboojiyaha ee PVC ee dahaarka ah ee bacda Polyester Pizza Cooler Bag Cuntada Bixinta Pizza
Bacda Pizza dahaaran
Bacda kululaynta Pizza
Bixinta dahaaran Pizza Tayada Sare leh ...
Qaboojiyaha Pizza -ga ee Cuntada ee dahaaran
PVC Custom jumlada dahaaran bac qaboojiyaha Poly ...
Kulaylka dahaaran Pizza Delivery Cuntada Pi ...